"ITM 2019": ho vahiny manokana i Indonezia
Hatao, ny 13, 14, 15 ary ny 16 jona 2019 ho avy izao eny amin’ny foibe CCI Ivato, ny “Foara iraisam-pirenena ho an’ny fizahantany eto Madagasikara” (ITM). Miara-mikarakara azy ny Ofisim-pirenena ho an’ny fizahantany (ONTM) sy ny Minisiteran’ny Fitaterana, ny Fizahantany ary ny Toetr’andro (MTTM). Mifanojo amin’ny faha-15 taon’ny ONTM rahateo ity hetsika ity.
Midadasika, mahatratra 30 000 m2, ny toerana hanaovana ny hetsika eny amin’ny CCI Ivato. Hitombo ho 300 ny tranoheva raha 247 ny taona 2018, afaka handray mpitsidika maherin’ny 15 000. Firenena nasaina manokana i Indonezia.
Ahitana sehatra maro
Nilaza ny Minisitry ny Fizahantany, Randriamandranto Joël, fa fotoana hanamafisana ny fampiroboroboana ny fizahantany eto amintsika ny “ITM”. Hihaonan’ny mpandraharaha sy ny orinasa mivantana (B2B), hikarohana mpiara-miombon’antoka sy mpanjifa. Hisy koa famelabelaran-kevitra arahina adihevitra.
Mirindra avokoa ny tranoheva rehetra, arakaraka ny sehatra isan-tsokajiny. Toy ny mpikarakara mpizahatany (tour operator), ny fitaterana an-tanety sy ana habakabaka, ny fialamboly, ny fiatranoana sy ny fisakafoana, ny taozavatra sy ny asa tanana, ny lafiny kolontsaina, toy ny hosodoko, sns.
Source: Taratra du 09 février 2019/Njaka A.
Lancement officiel de l’ITM 2019